Tracx: Kasbasho Aragtiyo, Kordhinta Ka Qaybqaadashada, iyo Qiyaasta Saamaynta Ay Ku Leedahay Shirkaddaada Bulshada Martech Zone
Tracx: Kasbasho Aragtiyo, Kordhinta Ka Qaybqaadashada, iyo Qiyaasta Saameynta Ay Ku Leedahay Shirkaddaada Bulshada
Sabtida, Juun 30, 2016 Douglas Karr
Shirkadaha ganacsiga waxay sii wadaan furitaanka awooda warbaahinta bulshada. La socoshada sumcadda, weydiisashada ra'yi celinta macmiilka, bixinta suuq-geyn afka ah, dhiirrigelinta waxyaabaha iyo dalabyada, waxbarista iyo kobcinta rajooyinka iyo macaamiisha. Warbaahinta bulshada ayaa siisa dhammaan - helitaanka, kor u qaadista, iyo haynta.
Xawaaraha macluumaadka iyo caqliga loo adeegsaday in loo igmado istiraatiijiyadda bulshada ee shirkadda waxay u baahan tahay barxad lagu kormeero, lagu cabbiro laguna fuliyo istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada.
Xalka Tracx wuxuu falanqeeyaa oo sifeeyaa qaddarka tiro ee juqraafi ahaan, tirakoobkiisa iyo xogta nafsiga ah ee laga helayo guud ahaan shabakadda bulshada si loogu gudbiyo aragti qoto dheer macaamiisha, tartamayaasha, iyo saamileyaasha. Kadib waxay ka dhigeysaa fikradahaas kuwo lagu shaqeyn karo iyada oo loo marayo mashiinka Talo-siinta Bulsho ee macnaha guud leh, taasoo awood u siinaysa is-dhexgal xikmad leh oo keena natiijooyin ganacsi oo macno leh.
Tracx waxay u kala jabisaa tan saddex qaybood oo muhiim ah - aragti, hawlgelin, iyo cabbiraad:
Aragtiyo - Waxay awood u siineysaa ganacsiyada inay helaan, bartilmaameedsadaan oo ay ka faa'iideystaan ​​kuwa wax gala. Aragtida ayaa u oggolaanaysa ganacsiyada inay helaan dhagaystayaashooda juqraafi ahaan, aqoonsashada meelaha kulul iyo helitaanka sheyga leh bartilmaameed heer sare ah. Dabcan, waxay awood u siineysaa labadaba qoraal iyo muuqaal dhageysi iyo falanqeyn waqtiga-dhabta ah.
Engagement - Soo hel oo maamul maaddooyinka awoodda badan leh, iskaashi ka samee guud ahaan hay'adda, jadwalna u samee jadwalka cusbooneysiinta iyo diiradda.
Cabbiraad - Maare oo kor u qaad ololahaaga warbaahinta bulshada, cadee wadiiqooyinka waxqabadka sare ee bulshada, isbarbar dhig natiijooyinka tartankaaga, la soco soo noqoshadaada maalgashiga, iyo cabbiraadda iyo maaraynta tilmaamayaasha waxqabadka gudaha.
Codso Demo Bulsho!
Tags: ganacsiga bulshadatracx
Xaaladda Suuq-geynta Agile ee 2016